“ဘာတွေလုပ်လိုက်လို့ ဒီလောက်အသားအရည်လှလာတာလဲ”အမေးခံရစေမယ့်သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း – Trend.com.mm
Posted on July 13, 2018 by Noel
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အသားဖြူဆေးတွေ၊အသားဖြူကရင်မ်တွေလည်းအလျှိုလျှိုပေါ်နေပါတယ်။ထိရောက်တဲ့ကရင်မ်တွေ၊ဆေးတွေရှိသလို အဲ့ဒီဆေးတွေမသောက်ရဲဘူး။ဒါပေမဲ့ အသားဖြူချင်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်! အခု Trend ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြမယ့်နည်းလေးကတော့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးဖြစ်လို့ လုပ်ကြည့်ရင် အရှုံးမရှိပါဘူးနော်။ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေတင်မကပဲ အသားအရည်လှချင်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်း ဒီနည်းလေးကအသုံးဝင်စေမှာပါ။
အသားညိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ဒီနည်းလေးကိုသေချာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ညိုနေရင်တောင် အသားအရည်က ညိုညိုစိုစိုလေးဖြစ်နေစေမှာပါတဲ့။ပြီးတော့ အသားဖြူဆွတ်သွားတာထက် ဒီနည်းလေးကို သေချာလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်ကထက် အသားအရည်က ကြည်လင်နေပြီး
အသားအရည်ကြည်လင်ပြီးဝင်းဝင်းလေးဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းကတော့…နွားနို့အစိမ်းကိုအဓိကသုံးတာပါပဲ။အဆင့် ၂ဆင့်ကိုတော့ လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အသားအရည်အတိုင်းရမှာမဟုတ်လား။
နွားနို့အစိမ်းအနည်းငယ်နဲ့သံပုရာရည် နွားနို့စိမ်းတစ်ဝက်အချိုးအစားကို ရောလိုက်ပါ။ပြီးရင် သင့်ရဲ့ အသားအရည်ပေါ်မှာ လိမ်းပြီး ၁၅မိနစ်လောက်ထားပါ။၁၅မိနစ်ပြည့်ရင်ရေဆေးချလိုက်ပါ။
*ဆန်မှုန့်/ဂျုံမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း နှစ်ဇွန်း
*နှင်းဆီရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
*ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
*နွားနို့အစိမ်း စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့…ပထမဆုံး ဂျုံ့မှုန့်ဖြစ်စေ ဆန်မှုန့်ဖြစ်စေ ပန်းကန်လုံးထဲထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် နှင်းဆီရည်ထည့်ပါ။ပြီးရင် ပျားရည်နဲ့နွားနို့ထပ်ထည့်ပြီးမွှေပါ။အားလုံးပြီးရင်တော့ အရေပြားပေါ်မှာလိမ်းလိုက်ပြီးညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။မိနစ် ၂၀လောက်ထားပြီးတဲ့အခါ ရေနဲ့သန့်စင်ပါ။
ဒီနည်းလေးက အရမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကြောင့်တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ်၊၃ကြိမ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တစ်လလောက်နဲ့သိသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ကဲ ဒီတော့ သဘာဝနည်းလမ်းလေးနဲ့အသားအရည်ကြည်လင်ဝင်းပအောင် လုပ်လိုက်ကြရအောင်။
ဒီနခေ့တျေကွီးထဲမှာ အသားဖွူဆေးတှေ၊အသားဖွူကရငျမျတှလေညျးအလြှိုလြှိုပျေါနပေါတယျ။ထိရောကျတဲ့ကရငျမျတှေ၊ဆေးတှရှေိသလို အဲ့ဒီဆေးတှမေသောကျရဲဘူး။ဒါပမေဲ့ အသားဖွူခငျြတယျဆိုတဲ့မိနျးကလေးတှလေညျးရှိကွတယျဟုတျ! အခု Trend ပရိသတျကွီးကို ပွောပွမယျ့နညျးလေးကတော့ သဘာဝနညျးလမျးလေးဖွဈလို့ လုပျကွညျ့ရငျ အရှုံးမရှိပါဘူးနျော။ပွီးတော့ မိနျးကလေးတှတေငျမကပဲ အသားအရညျလှခငျြတဲ့ယောကျြားလေးတှအေတှကျလညျး ဒီနညျးလေးကအသုံးဝငျစမှောပါ။
အသားညိုတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ဒီနညျးလေးကိုသခြောလုပျပေးမယျဆိုရငျ ညိုနရေငျတောငျ အသားအရညျက ညိုညိုစိုစိုလေးဖွဈနစေမှောပါတဲ့။ပွီးတော့ အသားဖွူဆှတျသှားတာထကျ ဒီနညျးလေးကို သခြောလုပျကွညျ့မယျဆိုရငျ အရငျကထကျ အသားအရညျက ကွညျလငျနပွေီး
အသားအရညျကွညျလငျပွီးဝငျးဝငျးလေးဖွဈစမေယျ့နညျးလမျးကတော့…နှားနို့အစိမျးကိုအဓိကသုံးတာပါပဲ။အဆငျ့ ၂ဆငျ့ကိုတော့ လုပျပေးရပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒါမှ ကိုယျလိုခငျြတဲ့အသားအရညျအတိုငျးရမှာမဟုတျလား။
နှားနို့အစိမျးအနညျးငယျနဲ့သံပုရာရညျ နှားနို့စိမျးတဈဝကျအခြိုးအစားကို ရောလိုကျပါ။ပွီးရငျ သငျ့ရဲ့ အသားအရညျပျေါမှာ လိမျးပွီး ၁၅မိနဈလောကျထားပါ။၁၅မိနဈပွညျ့ရငျရဆေေးခလြိုကျပါ။
*ဆနျမှုနျ့/ဂြုံမှုနျ့ စားပှဲတငျဇှနျး နှဈဇှနျး
*နှငျးဆီရညျ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ဇှနျး
*ပြားရညျ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ဇှနျး
*နှားနို့အစိမျး စားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျး
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့…ပထမဆုံး ဂြုံ့မှုနျ့ဖွဈစေ ဆနျမှုနျ့ဖွဈစေ ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့လိုကျပါ။ပွီးရငျ နှငျးဆီရညျထညျ့ပါ။ပွီးရငျ ပြားရညျနဲ့နှားနို့ထပျထညျ့ပွီးမှပေါ။အားလုံးပွီးရငျတော့ အရပွေားပျေါမှာလိမျးလိုကျပွီးညငျသာစှာနှိပျနယျပေးပါ။မိနဈ ၂ဝလောကျထားပွီးတဲ့အခါ ရနေဲ့သနျ့စငျပါ။
ဒီနညျးလေးက အရမျးကိုအကြိုးသကျရောကျမှုရှိတယျလို့ဖျောပွထားတာကွောငျ့တဈပတျကို ၂ကွိမျ၊၃ကွိမျလုပျပေးမယျဆိုရငျ တဈလလောကျနဲ့သိသာတဲ့အကြိုးရလဒျကိုမွငျတှရေ့မှာပါ။ကဲ ဒီတော့ သဘာဝနညျးလမျးလေးနဲ့အသားအရညျကွညျလငျဝငျးပအောငျ လုပျလိုကျကွရအောငျ။
26.7 million USD အကုန်အကျခံရိုက်ကူးမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန် နားထောင်ပေးသင့်တဲ့ သီချင်းကောင်းများ